क्‍वारेन्टाइन सकियो, अब कहिले आउन पाइन्छ सरकार ?’ – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारक्‍वारेन्टाइन सकियो, अब कहिले आउन पाइन्छ सरकार ?’
क्‍वारेन्टाइन सकियो, अब कहिले आउन पाइन्छ सरकार ?’
१५ बैशाख २०७७, सोमबार १०:०९ प्रकाशित
बैतडी : बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका ३ जोगे पार्की ‘बिसु’ अर्थात् नयाँ वर्षका लागि घर आउने तरखरमा थिए । गएको मंसीर महिनामा रोजगारीका लागि पिथौरागढ पुगेका पार्कीले चैत अन्तिम साता घर फर्कने योजना बनाएका थिए । तर नेपालमा चैत ११ बाट लकडाउन भएपछि उनी सीमा नाकामै रोकिए। सुरुमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्रै नेपाल जान पाइने भनेपछि उनी भारतीय क्वारेन्टाइनमै बसे ।
तर क्वारेन्टाइनमा बसेको १ महिना पूरा भइसक्दा समेत स्वदेश फर्काउने कुनै छाटकाट नदेखिएपछि उनी अत्तालिएका छन् । उनले भने, ‘खाली भुँईमा सुतेको एक महिना पूरा भएको छ । एकै ठाउँमा धेरै मानिस बसिरहेका छौं । घरका लागि भनेर कमाएको दुईचार पैसा पनि सकिसकेको छ । सरकार हामी नेपालका नागरिक होइनौं र ? विदेशी भूमीमा हामीले कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?’
जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका हरिश भट्टलाई पनि झुलाघाट पुगेको एक महिना हुन लागेको छ । भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरुको बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण पनि भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना कुनै लक्षण देखिएको छैन् । तर पनि स्वदेश ल्याउन सरकारले आनाकानी गरिरहेकोमा उनी पनि आक्रोशित छन् ।
उनले भने, ‘हामी मजदुर हौं । घरमा मकै छर्ने समय सुरु भइसकेको छ । हामीलाई सीमामै कति दिनसम्म अलपत्र राखिन्छ ? हाम्रो देशमा सरकार छ कि छैन् ? हामी स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशी भूमीमा आएका हौं । हाम्रा समस्या सरकार किन बुझ्दैन् ?’
जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाका नरेन्द्र धामीले पनि आफूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भने ,हामीलाई भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेको एक महिना भइसकेको छ । अहिलेसम्म हामीलाई संक्रमण कुनै लक्षण छैन् । तर पनि सरकार हामीलाई किन स्वदेश फर्काउँदैन ? हाम्रो पीडा सरकार किन बुझ्दैन ?’
यी सीमा पारी झुलाघाटमा रहेका केही नेपाली नागरिकका पीडा मिश्रित भनाइ हुन् । मजदुरीका लागि परदेश गएका घर फर्कन नपाएपछि आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
स्वदेशकै क्वारेन्टाइनमा बस्ने उनीहरुले बताए पनि सीमामा फसेकालाई फर्काउने विषयमा सरकारले केही निर्णय गरेको छैन् । झुलाघाटमा र धारचुलामा गरेर ९ सय मजदुर बैतडीकै मात्र भारतीय क्वारेन्टाइनमा छन् । आफूहरुले क्वारेन्टाइनको अवधि पूरा गरेर पनि स्वदेश नफर्काएकोमा उनीहरुको आपत्ती छ ।
सीमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक पालिकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका भएपनि उनीहरुलाई कहिले ल्याउने भन्ने निर्णय नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए । उनले भने, ‘सीमाबाट मजदुरहरु ल्याउने निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै सीमाबाट नेपालीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ ।’
सीमामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याएमा क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि स्थानीयस्तरमा तयारी भइसकेको तर केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले बताए ।
नेपाल-खनाल समूहले अन्तिम समयमा धोका दिएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष
भारतीय दूतावासबाट फर्केर सीधै बालुवाटार पुगे महन्थ ठाकुर
बादललाई राप्रपाको भोट
किलोको ३ रुपैयाँमा पनि बिकेन गोलभेडा, बारीमै कुहिन थाल्यो
एमालेद्वारा माधव नेपालसहित ४ नेतामाथिको कारवाही फुकुवा
आज राति ९ बजेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने
कम्युनिष्टहरुले हिम्मत हार्नुहुँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि किसान निराश
खाडी मुलुकबाट नेपालीले पठाएको अक्सिजन सिलिन्डर आइपुग्यो